हाम्रो भान्सामा प्राय नटुट्ने मसला हो सुकमेल । खासमा परिकार स्वादिष्ट बनाउन हामिले सुकमेल प्रयोग गर्ने गर्छौ । तर यसमा औष’धिय गुण हुन्छ ।
औ’षधिय गुणले भरि’पुर्ण सुकमेलमा नियासिन, पाइरि’डोक्सिन, रिवो’फ्लाभिन, थिया’माइन, भिटामिन ए, भिटामिन सी, सोडि’यम, पोटा’सियम, क्या’ल्सियम, कपर, आ’इरन, म्यांग’निज, जिं’क लगायतका तत्वहरु पाइन्छ ।
यसको सेवनले ग्या’स्ट्रिक, कोले’स्टेरोल तथा क्या’न्सरलाई नियन्त्र’ण गर्न सहयोग गर्छ । साथै यसको सेवनले रक्त’सन्चारमा पनि सुधार ल्याउछ । त्यस्तै सुकमेलको सेवनले मुटु’सम्बन्धी समस्याबाट पनि टाढा रहन सकिन्छ ।तपाईको दाँ’तसम्बन्धी रोग भएमा पनि यसले ठिक गर्छ ।
सुकुमेलले नपुंसकता, यौ’न उत्ते’जना नहुने र चाँडै वीर्य झर्ने समस्यालाई पनि ठिक गर्छ । सुकमेलको सेवनले घाँ’टी सुकेको पनि ठिक हुन्छ ।
त्यस्तै दम’को समस्या छ भने पनि सुकमेलले ठिक हुन्छ । तपाईमा यात्रा गर्दा बान्ता आउने गर्छ भने पनि सुकमेल च्या’प्दा बा’न्ता आउदैन । यसको सेवनले मानसिक त’नाव हुँदैन । यसको सेवनले मुखमा आउने दुर्ग’न्ध पनि कम गर्छ ।
मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ ? रातको समयमा गर्नुहोस् मात्र यी चार काम !
काठमाडौँ आजभोलि जंग फुडको बढी सेवन, फ्याटयुक्त खाना, व्यायामको अभा’वजस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरु नचाहादा नचाहदै मोटोपनको शि’कार बन्ने गरेका छन्। यदी तपाई पनि मो’टोपनका कारण तनावमा हुनुहुन्छ।
जति प्रयास गर्दा पनि मो’टोपन घटाउन सक्नुभएको छैन् भने चिन्ता नलिनुहोस्। आज हामी तपाईलाई केही यस्ता टिप्सका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन उपायबाट तपाई सजिलै मोटोपन घटाउन सक्नुहुनेछ। जुन टिप्स रातको समयमा नियमित रुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ।
ग्रीन टी को सेवन
राति सुत्नुअघि ग्रीन टी पिउनुहोस्। यसले शरीरमा मे’टाबलिज्म बढाउने गर्दछ, जसले रातभरमा तपाईको वजन कम गर्नमा सहयोग गर्दछ। खुर्सानीको सेवन वैज्ञानिक अध्ययका अनुसार मो’टोपन घ’टाउनका लागि खुर्सानीको सेवन गर्नु पर्दछ। सुत्नुअघि यसको सेवन भोजनमा गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईको वजन लगातार घट्ने गर्दछ।
चिनी र गुलियो खाने कुरा नखानुहोस्
चिनी तथा गुलियो खाने कुराले इंसु’लिन उत्पादन प्र’क्रियालाई उत्तेजित गर्दछ। इंसुलिन शरीरमा मुख्य फ्याट स्टो’रेज हर्मोन हुने गर्दछ। जब इंसु’लिनको मात्रा कम हुने गर्दछ, तब शरीरमा फ्याटको मात्रा बढ्न सुरु गर्दछ।
त्यसैले रातमा चिनी तथा गुलियो खाने कुरा नखानुहोस्।
पुरा निद्रा लिनुहोस् ख’राब निद्राका कारण पनि वजन बढ्ने गर्दछ। मिठो निद्राका लागि संगीत सुन्नुहोस्, स्नान गर्नुहोस्। राम्रो नि’द्रा लिदा मेटाबलिज्म बढ्ने गर्दछ र यसले फ्याट उत्पादनलाई बढाउने काम गर्दछ। ब्राइट नेपाल बाट
२०७७ चैत्र १९, बिहीबार १९:२० गते 1 Minute 1516 Views